आमाबाबु र छिमेकीलाई पनि कु’ट्ने राजुको यसरि भयो उद्दार !
हाडेटार ४ कात्तिक- मानवसेवा आश्रम लमजुङको पहलमा सुन्दरबजार नगरपालिका–२ परेवाडाँडास्थित हाडेटारका ३४ वर्षीय राजु विकको उद्धार गरिएको हो । उनलाई उपचारका लागि पोखरा लगिएको छ । दुई दशकदेखि कोठामा थुनिएका एक युवाको आज उद्धार गरिएको छ ।
उद्धारमा आश्रमका संयोजक अनिता अधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लोकराज पाण्डे, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिलकुमार शाही, प्रहरी नायब उपरीक्षक रवीन्द्रमान गुरुङ, नेपाल पत्रकार महासङ्घका जिल्ला उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर आलेलगायत खटिनुभएको थियो । विककी आमा लुरीमायाले उद्धारपछि सहज भएको बताउनुभयो । महेन्द्र मन्दिर माविमा कक्षा ४ मा पढ्दैदेखि विकमा मानसिक समस्या देखिएको हो । त्यसपछि उनलाई घरमा कोठामा थुनेर राखिएको थियो ।
यी छोरा जस्ले आफ्नै आमाबाबु कुट्छन्, छिमेकी तर्सिएर भाग्छन् !
यहाँस्थित सुन्दरबजार नगरपालिकाका एक युवा दुई दशकदेखि आफ्नै घरको कोठामा बन्दी अवस्थाको जीवन बिताउँदै आएका छन् । सुन्दरबजार नगरपालिका–२ हाँडेटारका ३४ वर्षीय राजु विकको मानसिक सन्तुलन गुमेपछि दुई दशकदेखि कोठामै बन्दी अवस्थामा रहँदै आएका हुन् ।
“उसले आमाबाबु कोही भन्दैन जसलाई पनि जे भेट्छ त्यसले हान्छ”, राजुकी आमा लुरीमायाले भन्नुभयोे, “केहीदिन अघि मात्रै बिहान खाना पु¥याउन गएको मलाई टाउकोमा चि र्पटले हान्यो, बाबाले रोक्न खोज्दा उहाँलाई पनि नाकमै बजायो, हामी रग’ताम्य हुँदै भागेर बाँच्यौँ ।”
उहाँको मानसिक सन्तुलन गुमेपछि जसलाई जतिबेला पनि हातपात र आ क्रमण गर्ने भएकाले परिवारले घर नजिकै छुट्टै कोठा बनाएर राख्दै आएको छ । राजुलाई झण्डै १४ वर्षको उमेरबाट कोठामा राख्दै आएको परिवारले जनाएको छ । उहाँको स्वभाव निकै आ’क्रमक भएकाले बाहिर छाडेपछि जो कसैलाई आ क्रमण गरिहाल्ने समस्याले परिवारजन थप मर्कामा परेका छन् ।
“उसले आमाबाबु कोही भन्दैन जसलाई पनि जे भेट्छ त्यसले हान्छ”, राजुकी आमा लुरीमायाले भन्नुभयोे, “केहीदिन अघि मात्रै बिहान खाना पु¥याउन गएको मलाई टाउकोमा चि र्पटले हान्यो, बाबाले रोक्न खोज्दा उहाँलाई पनि नाकमै बजायो, हामी रग’ताम्य हुँदै भागेर बाँच्यौँ ।” राजुले चि र्पटले हा नेर घाउ लागेपछि टाउकोमा १० ओटा टाँका लगाउनु परेकोसमेत लुरीमायाले बताउनुभयो । “खाना दिने बेलामा कहिले त भाग्ने गर्छ र केही दिनसम्म त घरमै आउँदैन । छोरालाई कसैले पि टेर हो कि कतै लडेर हो शरीरभरि घाउ बनाएर घर फर्किन्छ”, बुबा पूर्णबहादुर विक (कामी)ले भन्नुभयो ।
यति मात्रै होइन कोठाबाट भागेर छोराले छिमेकीलाई समेत कु’ट्ने गरेको बताउँदै कति चोटि गाउँलेलाई जरिवानासमेत तिर्दैै आएको उहाँको भनाइ छ । छोरालाई कोठाबाट बाहिर निस्किन नदे भन्दै स्थानीयले भन्ने गरेको र छोराले विध्वंश पार्ने डरले कोठामै राख्नुपरेको आमा लुरीमायाले बताउनुभयो ।
स्कुलमा साथीहरुलाई कु’ट्ने, पि’ट्ने र जथाभावी गर्ने जस्ता गतिविधि गर्न थालेपछि विद्यालय छुटाएर घरमै कोठामा राख्ने गरिएको आमाले बताउनुभयो ।
राजुको मानसिक सन्तुलन मात्रै गुमेको छैन, छारे रोगसमेत रहेको परिवारले जनाएको छ । छोराको उपचारका लागि वडा कार्यालयदेखि जिल्ला समन्वय समिति लगायतमा कुरा राखे पनि समस्याको समाधन केही हुन नसकेको बुबा विकको भनाइ छ । गाउँकै महेन्द्र मन्दिर माविमा ४ कक्षामा पढ्दै गर्दादेखि उसको मानसिक सन्तुलन बिग्रँदै गएको आमाको भनाइ छ । स्कुलमा साथीहरुलाई कु’ट्ने, पि’ट्ने र जथाभावी गर्ने जस्ता गतिविधि गर्न थालेपछि विद्यालय छुटाएर घरमै कोठामा राख्ने गरिएको आमाले बताउनुभयो । उहाँको परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले खाना लाउनै धौधौ छ । राजुको उपचारका लागि परिवारले पर्याप्त खर्च गर्न नसक्दा उहाँ लामो समयदेखि कष्टकर जीवन विताउन बाध्य हुनुहुन्छ ।
“पैसा भएको भए राम्रो अस्पतालमा लगेर स्वास्थ्य जाँच गर्न पाए ठिक हुने थियो होला, कसैले सहयोग गर्दिए म धेरै भाग्यमानी र खुसी हुने थिएँ”, आमा लुरीमायाले भन्नुभयो, “उपचार गर्न नसके पनि कतै छोरालाई खाना र बस्ने ठाउँको व्यवस्था भए त्यहीँ पठाउनुहुन्थ्यो ।
छोरालाई पनि राम्रो अनि हामी आमा बाबुलाई पनि ढुक्क हुन्थ्यो ।” लुरीमायाको चार छोरा र दुई छोरी छन् । मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको राजु माइलो छोरो हुन् । बाहेक सबैजनाले विवाह गरेर कोही कतै कोही कतै पुगेका छन् । घरमा आमा लुरीमाया, बाबा पूर्णबहादुर र राजु मात्रै छन् । बुढाबुढीले कामकाज गर्दै परिवार चलाउँदै आएको बुबा पूर्णबहादुरले बताउनुभयो ।